HPC002 Electronic Visitor Counter - China HPC002 Electronic Visitor Counter Supplier,Factory - Highlight
Security hafa Products
Home » vahaolana » People Counter » Infrared People Counter
110V na 220V AC fahan'ny
Easy angona retrieval araka ny daty na ny ora, na amin'ny month..etc
500 ora fahatsiarovana
11.5 manga mirefy efijery LCD Display
1-7 metatra \_ 'lavitra
Ny Electronic Visitor Counter ny marina, azo antoka, mora ny hametraka, ambany fikarakarana, ary tena takatry. maro mpaninjara, trano famakiam-boky, tranombakoka, sy ny orinasa hafa no mandray soa avy amin'ny maro ireo rafitra manome tombontsoa. Saika misy karazana raharaham-barotra dia afaka mandray soa avy amin'ny tahirin-kevitra ny olona Counting rafitra manome.
Mpaninjara dia mampiasa ny Electronic Visitor Counter mba hamantarana varotra amin'ny mpanjifa sy ny tampon'isan'ny mpanjifa ratios fotoana fifamoivoizana avy amin'ny isan'ora, isan'andro, isan-kerinandro, fomba fijery isam-bolana.
Trano famakiam-boky dia misafidy ny Electronic Visitor Counter, satria manome tena takatry ny vahaolana ho an'ny fisiana ara-mandeha ho azy ny mpitsidika nandritra ny vanim-potoana sasany ny fotoana. Misy trano famakiam-boky ireo mihitsy aza ny olona mampiasa ny Wireless rafitra manisa sy ny rindrambaiko fonosana mba haharaka ny tampon'isan'ny ora for miasa tanjona.
*Voalamina tsara sy mazava lanja (87*59*27MG,65.4h)
*Easy angona retrieval araka ny daty na ny ora, na amin'ny volana…sns
*Counter Management alalan'ny Windows, tsy misy rindrankajy fanampiny ilaina ny olona manisa
*1.15 mirefy efijery LCD Asehoy ny manga ho mora ny maso
*Anaty fahatsiarovana afaka mitahiry hatramin'ny 500 ora(Per ora isan-teny)
*Replaceable bateria niasa ho an'ny tena Wireless fametrahana
*Zava-dehibe manerana androm niakatra ho any 5-7 meters, fampisehoana tsara indrimetatramin'ny 3-4 meters
*Fitomboan'ny fampidirana napetraka na tsy voatery seza plastika ABS
*Setting &safidinao dia mitantana an-toerana amin'ny alalan'ny fototra birao eo amin'ny latabatra
*LCD lamba fototra-hazavana hiverina-on / eny rehefa ny olona ihany no fidirana
*Power tamin'ny / eny fanisam-potoana ela velona bateria
*Ambany bateria famantarana eo amin'ny efijery LCD
*Fiteny roa for fandidiana(Anglisy / Sinoa)
*LED famantarana ho an'ny malemy famantarana
*Traffic antontan-kevitra ao amin'ny biraonao miseho ho nanontany avy hatrany
*Afaka mba haorina any EAS Antenna mba miara-miasa amin'ny rafitra
*Tiny tsara endrika amin'ny fampisehoana
*Mampianiana misy na ny electrify sy ny bateria
Ny Electronic Visitor Counter dia ampiasaina amin'ny karazana toeram-pivarotana:
Highlight dia iray amin'ireo voalohany manufactuer ny mpanjifa mifanohitra ao Shina. Nanjary infrared izahay mpanjifa mifanohitra amin'ny begining, ary avy eo dia nitandrina ny vaovao farany izany
manohana vokatra tsara kokoa ho an'ny mpanjifa. ankehitriny, ho an'ny mpanjifa infrared mifanohitra, ny marina tahan'ny mety ho 95%.
Mba hihaona hafa takina ny mpanjifa, camere olona mifanohitra dia vonona izao. Araka ny marina avo tahan'ny, mora ny fametrahana, tatitra antsipiriany tabilao, dia afaka ny ho intergrate
an-pos / ERP rafitra, 24 ora amin'ny Internet fanohanana ataovy tena malaza izao.
Efa namorona mpanjifa mifanohitra vahaolana ho an'ny fivarotana maro, toy ny China Telecom, Sony fivarotana elektronika, iPhone fivarotana, Lego sy ny BMW fampirantiana sy ny sisa.
ankehitriny, serching fahafahana misafidy isika manerana izao tontolo izao. Fa ny fahafahantsika misafidy, betsaka ireo tombontsoa Vidy, teknolojia fanohanana sy ny sisa.
Tonga soa eto amin'ny hiaraka aminay!
More modely, tsindrio ny sary etsy ambany:
Raha mitady infrared ny olona araka ny marina hanoherana avo tahan'ny, antsipiriany rindrambaiko, Mety amin'ny rojo fivarotana, tsindrio eto ambany:
Ho an'ny fakan-tsary ny olona mifanohitra, azafady jereo eto ambany:
Bus Mpandeha Counter
EAS Mikarakara Fahasalamana
EAS Detacher & fisoloana akanjo
lamba famaohana Tag
Milk Can Mikarakara Fahasalamana
Security lisitry ny Bag
Address: Block C, 5faha Floor, TongPu Building, No. 1220, TongPu Road, Shanghai, Shina